लोकमान कुन लोकको यमराज हुन् र कानून नलाग्ने ? « Khasokhas Follow @khasokhasmag
लोकमान कुन लोकको यमराज हुन् र कानून नलाग्ने ?
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको घरमा सर्वोच्च अदालतले म्याद तामेली गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुनु कानूनी शासनमाथिको प्रहार भएको भन्दै सांसदहरूले सदनमा ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
व्यवस्थापिका संसदको मंगलवार बसेको बैठकको विशेष समयमा सांसदहरूले सर्वोच्च अदालतले म्याद तामेली गर्न नसक्ने अबस्था आउनु दुर्भाग्य भएको बताएका हुन् । विशेष समयमा नेपाली कांग्रेसका राधेश्याम अधिकारीले संवैधानिक निकायको प्रमुखले कानूनको खिल्ली उडाउँदा संसद टुलुटुलु हेरेर बस्न नमिल्ने बताए ।
उनले अख्तियार प्रमुख कार्कीको विदा कहिलेसम्म स्वीकृत भएको भन्नेबारे सदनलाई जानकारी गराउन माग गरे । एमालेका रेवती रमण भण्डारीले लोकमानको घरमा सर्वोच्च अदालतले म्याद तामेली गर्न नसक्ने अवस्थाले देशको शान्ति सुरक्षा कस्तो छ भनी गृहमन्त्रीसँग प्रश्न गरे ।
थरुहट तराई पार्टीकी गंगा चौधरी सत्गौवाले प्रमुख राजनीतिक दलको संरक्षणकै कारण सर्वोच्च अदालतले लोकमानको घरमा म्याद तामेली गर्न नसकेको बताइन् । ‘कानूनको संरक्षण गर्नुपर्ने मान्छेले कानूनको धज्जी उडाउने ? ‘लोकमानसिंह कुन लोकको यमराज हुन्,उनको घरमा म्याद तामेली गर्न नसकिने ?,’ चौधरीले भनिन्, ‘भ्रष्टाचारीलाई देश निकाला गर्नुपर्छ । उनलाई बचाउने राजनीतिक दललाई पनि कानूनको कठघरामा ल्याउनुपर्छ ।’